माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव, कार्यकर्तालाई दिए ४ वटा ‘होमवर्क’ - Himali Patrika
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? प्रचण्डले मागे सुझाव, कार्यकर्तालाई दिए ४ वटा ‘होमवर्क’
हिमाली पत्रिका ३ जेष्ठ २०७८, 8:37 am
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी पुनर्स‌रचनाको संकेत गरेका छन् । आइतबार उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत् आगामी दिनमा पार्टीको राजनीतिक एव‌ संगठनात्मक संरचनालाई समेत नयाँ ढंगले अघि बढाउने सोच बनाएको बताएका हुन् ।
माओवादी केन्द्र कस्तो बनाउने ? भन्ने बारेमा सुझाव दिनको लागि [email protected] मा आफ्नो धारणा पठाउन सकिने प्रचण्डले जानकारी दिएका छन् ।